झ्यालमा रमाउने केटी (तोत्तो–चान ) - नानीबाबु अनलाईन
किताब प्रेरक प्रसङ्ग विद्यालय शिक्षक
हामी बाल्यकालमा के चाहन्छौ ? खेल्नु, मस्ती गर्नु, मन लागेको ठाउँमा घुम्न जानु, मन लागेको कुरा खानु, मन लागेको गर्नु । अनि यी सब गरिरहँदा हामीलाई कसैले नरोकोस् । स्वतन्त्र भएर यी सबै गर्न पाइयोस् । अनि स्कुल पनि यस्तै होस् जहाँ बन्धनभन्दा बढि स्वतन्त्र हुन पाइयोस् । हैन त ? तर सोचे जस्तो कहाँ हुन्छ र ? घरमा आमाबाबाका आफ्नै अनेक काम हुन्छन् ।
नचाहाँदा नचाहँदै पनि बालबालिकालाई उहाँहरूले आफ्नाे समय र कामको व्यस्तताअनुसार ढाल्नु परिहाल्छ । यो अभिभावकको बाध्यता पनि हो । अनि स्कुल पनि आफ्नै अनेक नियममा बाधिएको हुन्छ । हरेक बालबालिकालाई चाहेजस्तो हदको स्वतन्त्रता दिन मुस्किलै पर्छ ।
यस्तै विषयहरूमा बाल्यकालका आफ्ना अनुभव सँगालेर सुप्रसिद्ध जापानी कलाकार तेच्चुको कुरायोनागिले लेख्नु भएको पुस्तक हो– झ्यालमा रमाउने केटी । यस पुस्तकमा उहाँ आफैं प्रमुख पात्र हुनुहुन्छ । कलाकार तेच्चुकोको सानामा माया गरेर बोलाउने नाम हो – तोत्तोचान । तोत्तो चान पहिलो पटक स्कुल भर्ना भएको कुराबाट सुरु हुन्छ पुस्तक । भर्ना भएको केहिदिनमा नै उनी चकचके र चुलबुले भएका कारण स्कुलबाट निस्कासित हुन्छिन् । अनि उनी पुग्छिन् अचम्मको स्कुलमा । रेलका पुराना डब्बामा संचानल गरिएको त्यो एक असाधारण स्कुल हुन्छ । जहाँ हरेक प्रकारका नानीबाबुहरू पढिरहेका हुन्छन् । बौद्धिक र शारीरिक अपांगता भएकाहरू पनि त्यो स्कुलमा हुन्छन् ।
त्यो स्कुलका प्रधानाध्यापक बच्चालाई अति माया गर्ने खालका हुन्छन् । उनले बिशेष बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरि खोलिएको सो स्कुलका बालबालिकालाई कसरी ब्यबहार गर्ने भनेर पेरिसमा गएर अध्ययन गरेका हुन्छन् । उनी बालबालिकालाई पुरस्कार वापत पुस्तक वा कलम दिदैनन् । बरु दैनिक घरमा पाक्ने सब्जीहरू दिन्छन् र भन्छन्, ‘यो तिमीहरूको कमाई हो । घरका मान्छेलाई मिठो बनाएर पकाएर खुवाओ ।’ त्यो स्कुलका साना साना कुराबाट तोत्तो चान यति प्रभावित हुन्छिन् कि अघिल्लो स्कुल जानै नमान्ने उनी अब कतिबेला स्कुल जाने बेला हुन्छ भनेर कुर्दै बस्छिन् ।
पुस्तकको बिषयबस्तु एउटा औसत प्राथमिक बिद्यालयमा भइरहने नियमित प्रकृतिका घटना नै भए पनि प्रभावशाली प्रस्तुतिका कारण यो पुस्तक पढिरहँदा कुनै रोमान्चक उपन्यास पढेजस्तै लाग्छ । यो पुस्तक एक प्रकारले ती असाधारण शिक्षक एवं बिद्यालय संचालकप्रति एकजना बिद्यार्थीले गरेको कृतज्ञता पनि हो । कितावले ती सञ्चालकको बालबालिकाप्रतिको दृष्टिकोणलाई अत्यन्त मिहिन रूपमा प्रकाश पारेको छ ।
सन् १९८१ मा पहिलो संस्करण छापिएको यो पुस्तक एक बर्षमै जापानमा ४५ लाख प्रति बिक्री भएको थियो । यसैले कुरायोनागीलाई सर्वाधिक पढिने लेखकको श्रेणीमा स्थापित गरिदियो । ६० भन्दा बढी भाषामा अनुवाद भईसकेको यो पुस्तक नेपालमा २०७२ सालमा पहिलो संस्करण छापिएको हो । लेखक कुरायोनागीले तोत्तोचान फाउण्डेसन स्थापना गरी संसारभरिका बालबालिकाको हितमा काम गरिरहेकी छिन् । यसैक्रममा उनी नेपाल पनि आइसकेकी छिन् ।
शिक्षक मासिकले प्रकाशन गरेको यो पुस्तकलाई सरोज धितालले अनुवाद गर्नुभएको हो । यसको सम्पादन शरच्चन्द्र वस्तीले गर्नु भएको छ । पुस्तकको मूल्य ३०० रुपैयाँ छ ।